Indawo yokuhlola injini ye-ABLE eyenziwe ngonjiniyela bezinjini e-Aerospace Systems Research Group e-UKZN.
I-Aerospace Systems Research Group (i-ASReG) yase-UKZN ihlole ngempumelelo injini yesiphuphutheki okuyisinyathelo sokuqala sokwethula indizamshini yasemkhathini.
I-Ablative Blow-Down Liquid Engine (i-ABLE) yenziwe ngabafundi abenza izifundo zeMasitazi neZobuDokotela ezifundweni ZobuNjiniyela BeziNjini e-UKZN.
I-ASReG yenza izinhlelo zokubeka amasathelathi angama-200kg okundiza emkhathini ezokuxhumana, ezokubheka imvelo, ezolimo nezomhlaba. Lomsebenzi oyimpumelelo we-ABLE uzokwenza ithimba liqale umsebenzi enjinini encane yesiphuphutheki esakhiwayo.
Uhlelo i-Space Propulsion Programme lwe-ASReG luxhaswe nguMnyango WezeSayensi (i-DSI).
Lomsebenzi wokuhlola injini we-ABLE obe yimpumelelo enkulu wenziwe e-Denel Overberg Test Range eNtshonalanga Kapa isikhathi esingamasonto amathathu. Abafundi abayishumi beZobunjiniyela beziNjini bahlole injini yesiphuphutheki.
Injini ye-ABLE ivutha nge-liquid oxygen (i-LOX) nophethiloli we-Jet A-1 kanti ngokwesakhiwo ufana nezinjini ezintsha zezinqola ezihlala amasathelathi.
Kulomkhankaso abafundi abagcinanga nje ngokwakha injini kepha benza nendawo esezingeni eliphezulu yokuhlola enezindawo ezinophephela, uhlelo lokulawula injini oluzishintshayo nendawo ehlala injini.
Ngesikhathi sokuhlolwa i-ABLE ikhipha Amandla ali-18 kilonewtons (cishe ali-1.8 ton) ashe ngokushesha nangokudonsa. Nakuba zikhona izinjini ezinkulu zaloluhlobo, i-ABLE ingenye yezinjini zeziphuphutheki ezinamandla ezakhiwe yizitshudeni.
Ngalempumelelo i-UKZN iqhubekile nokuzenzela igama ekubeni ngesinye sezikhungo ezihlonishwayo eNingizimu Afrika kwezobunjiniyela bomkhathi. NgoNdasa kulonyaka, i- ASReG iphule irekhodi lase-Africa ngekhathi indizisa isiqhumane ibanga eli-18km. I-ABLE yinjini ehlukile, ehamba ngophephela boketshezi.
Ukubamba ubuchwepheshe benjini yoketshezi kubeka i-UKZN ne-ASReG endaweni enhle yokuqala umsebenzi wokuthuthukisa inqola ehlala iziphuphutheki. Inhloso enkulu wukuphucula imboni yeziphuphutheki yaseNingizimu Afrika ukulungela ubuchwepheshe bangomuso.
Imenenja ye-SAFFIRE Engine Programme e-UKZN uDkt u-Jean Pitot uthe: ‘Impumelelo enkulu yokuhlola injini ye-ABLE iwubufakazi bomsebenzi omuhle wonjiniyela abancane baseNingizimu Afrika lapho kunezinselelo khona emhlabeni. Ukuthuthuka kwalomkhakha eminyakeni eyishumi edlule kuyamangalisa kanti kuzoqhubeka njengoba indaba yeziphuphutheki izoba yingxenye yempilo yethu yemihla ngemihla. Ithimba le-ASReG liyaziqhenya ngeqhaza elikhulu iNyuvesi yaKwaZulu-Natali elibambile ekubekeni isisekelo esizokwenza i-Afrika ikwazi ukungena ngqo emnothweni wezomkhathi.’
Amagama: wu-Michael Brooks